Umva we-Ice Pack, ukugoba idolo nge-Ice Pack, iiSokisi zoNyango olubandayo- Huanyi
Inkampani yethu izinikele ekuveliseni iimveliso zekhompiyutha ezibandayo nezishushu
I-Jiangsu Huanyi Industrial Co., Ltd.yifektri entsha yetekhnoloji. Inkampani izinikele kuphuhliso lweemveliso ze-gel ice pack ngobuhle bakho / ezisempilweni nezonyango / ezokusongelwa kwezemidlalo / ukhathalelo lwasekhaya lokuthomalalisa unyango olushushu nolubandayo ukusuka ngo-2012. Sibonelela ngokuphumla, unyango lomzimba kunye noncedo lokuqala ebomini, iimveliso ziyaqinisekiswa nge-SGS, i-FDA, i-CE, i-REACH, i-AZO, i-PROP65, umzi-mveliso kunye nophicotho-zincwadi lwe-BSCI, sinamava asebenzisanayo neLIDL, ALDI, Wal-mart kunye neDisney.
I-Jiangsu Huanyi Industrial ekhethekileyo kwindawo eshushu nebandayo yokupakisha i-ice ice iminyaka emininzi, sinamava amaninzi ukwenza isiko umbono wakho ube yinyani, uncede ekwenzeni iimveliso zakho ngendlela efanelekileyo yempahla, yonke imveliso iyi-100% yovavanyo loxinzelelo kunye ne-100% yomkhondo inkqubo yemveliso. Bonke abathengisi bethu bayinjini yobungcali, ungathetha nabo malunga nalo naluphi na uluvo okanye emva kwenkonzo yokuthengisa, umntu omnye uyazi kakhulu, ke yiba ngumhlobo nathi, uyonwabele inkonzo yethu ukusukela ngoku.
Intshayelelo L w Ukutyeba Ubunzima M 40cm 30cn 1.0cm 700g L 50cm 40cm 1.0cm 1100g LL 60cm 50cm 1.0cm 1800g XL 90cm 50cm 1.0cm 2000g Ukuthoba ithiyori yobushushu bemethi epholisayo. I-polymer ye-gel yokupholisa ifana ne-gel polymer ekupholiseni ukunamathisela iintsana.I-gel polymer enomxholo ophezulu wamanzi ngokufanelekileyo ukufunxa ubushushu kumzimba womntu ukuya emethini kwaye ixhomekeke ekuqhubeni okuphezulu kunye nokusabalalisa kwe-gel polymer ukufudumeza ukwenza into enhle ukutshisa ubushushu kunye nokudlulisa ...
Intshayelelo PORTABLE & CONVENIENT- Le sleeve ipholileyo yewayini ilula, icwecwe kwaye ilungele. Yisa nje kwipikiniki, ngaselunxwemeni, enkampini, okanye nakweyiphi na iminyhadala ukonwaba kwaye uphumle neziselo ezibandayo ngaphandle kwebhakethi lomkhenkce. KULULA UKUSETYENZISWA – Beka i-chiller yebhotile ye-champagne kwisikhenkcezisi malunga neeyure ezi-2, kwaye utyibilike emkhonweni ukuze ubande iziselo ngokukhawuleza kwaye uzigcine ubanda kangangeeyure. Ukufezekisa ukusetyenziswa kwewayini, ibhiya, iChampagne, njl.Ubungakanani bemveliso: 6.1 x 9.25 Igama le-intshi: Ibhegi epholileyo yewayini, ...
Intshayelelo Kushushu kunye neCold Compress, enokuphinda isebenze, akukho ukuvuza, Ubungakanani obungabinetyhefu: 19 * 9cm, 20 * 10cm, 22 * ​​11.5cm Ubunzima: 120g, 130g, 160g, 180g Isicelo esisetyenziselwa unyango olushushu nolubandayo sinceda ukukhulula amehlo adumbileyo, Amehlo okukhukhumala, ukungahambi kakuhle kwesinus, migraine, ibonelela ngesiyobisi ngaphandle kweziyobisi. Ingasetyenziselwa ukuvala ukukhanya kwemaski yamehlo kubushushu begumbi. Ibonakala ngathi yimaski, kwaye inokusetyenziswa njenge-mask yokupholisa iliso, kodwa musa ukunciphisa umda ekucingeni kwakho. Le mveliso ephambili cofa eshushu okanye comp abandayo ...
Intshayelelo NGOKUPHILA NGOKUTSHISEKILEYO NOKUBANDAYO - Aba bantwana bepakethe yejeli bayatshintsha phakathi kokucinezelwa okushushu nokupholileyo, bayakhawuleza ukuba ngumkhenkce kwaye kulula ukuyisebenzisa. Beka iipakethe zomkhenkce emanzini ashushu okanye kwisikhenkcezisi, banokutshintsha ngokulula phakathi kwamaqondo obushushu kwaye baya kugcina ubushushu okanye ukubanda ixesha elide kunye nokusonga okupinki okuthambileyo. Unyango olubandayo lunceda ekucothiseni ukuhamba kwegazi, ukukhulula ukopha kunye nokudumba. Ubushushu / unyango olushushu luncedo ngokukhawulezisa ukuhamba kwegazi kunye nokusika ukuphilisa, ukubuyela ngokukhawuleza kwi-inju ...
Intshayelelo UKUQHAWULA IINTSHUKUMO ZEDOLO: Ukujolisa ngaphambili nangasemva kwedolo ngoxinzelelo olunokutshintshwa kunye nonyango olushushu okanye olubandayo, umkhenkce obandayo wedolo ulinciphisa ngokufanelekileyo ukudumba, iintlungu kunye nokudumba ngenxa yokudinwa kwemisipha, ukwenzakala okanye uqhaqho. Ukuqiniswa kwamadolo athambileyo kukwabonelela ngesiqabu esifanelekileyo sokuqoboka kunye nokuxinana, i-ACL, isifo samathambo, ukonzakala kwezemidlalo, utyando kunye nokunye. UKUPHILA OKUSHISAYO OKANYE OKUBANDAYO: Kubandakanya iipakethe zejel ezisuswayo kunyango olushushu okanye olubandayo. Ipakethi nganye ityibilika ngokulula kwi ...
Intshayelelo Ingqele inokuthi icothise ukuhamba kwegazi, unyango olubandayo lucothisa ukujikeleza, ukunciphisa ukudumba, ukuqaqamba kwezihlunu kunye nentlungu. Landela inkqubo yeRICE emva kokonzakala: Phumla: Thatha ukuphumla kwaye unqande ukusebenzisa indawo eyonzakeleyo. Umkhenkce: Umkhenkce indawo eyonzakeleyo ngokukhawuleza, oku kunceda ukunciphisa ukudumba, ukopha kunye nokugruzuka kwangoko. ICompress: Zisongele ngebhandeji, uhlala ugcina ibhandeji yothambeka kwiikiti zoncedo lokuqala. Nyusa: Gcina ukwenzakala ngaphezulu kwentliziyo yakho ukunciphisa ukudumba. Kutheni Khetha Us? 1 ...
Kutheni sikhetha i-gel ice pack ukunciphisa iintlungu? Nokuba unentlungu emva ngenxa yokuhamba ngebhayisikile, okanye ukudumba okubuhlungu kuqhaqho, sebenzisa nje le pack yomkhenkce wentlungu nethambo. Igama leMveliso: Gel Pad Ice Pack yoBungakanani beNeck: 22 * ​​7.5 INCHES Ubunzima: 800G uLogo oCwangcisiweyo kunye neSatifikethi sephakheji: I-SGS, i-FDA, i-CE, i-REACH, i-PROP65, i-BSCI Le miqulu yejel igcina iguquguquka emva komkhenkce, ukuze uzibeke ecaleni kwakho idolo, igxalaba, nentamo. Emva kweeyure ezimbalwa kwifriji, ipakethe yomkhenkce yokwenzakala ...
Intshayelelo Izinto: ilaphu le-satin edityanisiweyo yePVC yokutyabeka Ubungakanani: 47cm ubukhulu, i-600g Umbala: umbala o-pinki oqhelekileyo, umbala ungenziwa ngokwezifiso ukuba ubungakanani bungaphezulu kwe-2000pcs yokusetyenziswa: Emva kokuhlamba ishampu, sebenzisa cream yokubhaka ngokulinganayo, nxiba ikepusi yokuhlamba, ikepusi yokubhaka kubushushu obuphakathi kwi-microwave kangangemizuzu engama-2-3. Xa iqondo lobushushu limalunga nama-35-45 degrees, linxibe malunga nemizuzu eli-15. Ilungele imvume, ukukhathalelwa emva kwedayi, kunye nokugcinwa komgangatho weenwele mihla le. Kutheni Khetha Us? ...
Ukuqonda, umbuzo wamkelekile ukubiza nangaliphi na ixesha